Somaliland.Org » Shirkadda DAHABSHIIL oo Mar Kale Beenisay Dacaayado ay faafiyeen Mareego Internet-ka ahi
Shirkadda DAHABSHIIL oo Mar Kale Beenisay Dacaayado ay faafiyeen Mareego Internet-ka ahi
July 23rd, 2012 Comments Off Hargeysa (Somaliland.Org)- Shirkada Dahabshiil ayaa mar kale beenisay dacaayado ay qaar ka mid ah website-yadu ka faafiyeen maalmihii la soo dhaafay, kaasi oo ku saabsanaa in la jabsaday bog xisaabeedyadooda qaarkood.
Sidaasna waxa lagu sheegay war-saxaafadeed caawa ka soo baxay maamulka shirkada Dahabshiil, waxaanu u dhignaa sidan:-
“Waxa aynu la soconaa in ay jiraan dad website-yada qaar ku qoray dacaayado been abuur ah oo ka-dhan ah Shirkadda Dahabshiil. Ma aha markii ugu horraysay ee Website-yadaasi qaarkood ay ka faafiyaan dacaayado iyo been abuur shirkadaha xawaaladaha, gaar ahaanna Dahabshiil, muddo dhawr sano ah.
Hore waxa shirkaddu u saartay dacwad maxkamadeed websiteyadaas oo waxa la siiyey digniin ah inay ka waantoobaan beenahaasi iyo dacaayadaha ay faafinayaan, ujeedada ay ka leeyihiinna ahayd dano gaar ah oo dhaqaale. Taasina ma aha wax dhici kara. Waxa kale ay rabaan in lagu waxyeeleeyo dhaqaalaha dadka Soomaliyeed iyo sumcadaha Hay’adaha u adeega ee uu Dahabshiil ka midka yahay, iyadoo aanu ka foojiganahay isla markaana aanay u suurto-galayn damacoodaasi.
4. Waxa kale oo aanu u sheegaynaa kooxdaasi dacaayada iyo been abuurka faafinaysa in aanu sharciga caalamiga ah la tiigsan doono.”